सङ्गीत – Page3– Pahilo Page
सबको नजर लागेछ अञ्जु पन्त राम्री भएपछि
काठमाडौं । यसै त नेपाली सांगीतिक आकाशमा सर्वाधिक सुनिएकी कोकिलकण्ठी अञ्जु पन्त । त्यसैमाथि सुन्दरी अञ्जु पन्त झनै राम्री भएपछि के होला ? के हुनु ? सबैको आँखा लाग्छ । हो, त्यस्तै भएको छ । आज म कति राम्री सबले नजर लगाए जन्मघर छाड्ने बेला सबका आँखा रसाए केही दिन
आयो तुलसी सिवाकोटीको ‘पिपल पाते ओंठैले‘ (भिडियोसहित)
स्वीजरल्याण्ड । युरोपमा नै चर्चित रहेका गायककार तुलसी सिवाकोटीको ‘ पिपल पाते ओठैले ‘ बोलको गितको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । म्युजिक भिडियोमा प्रवेश ढुंगाना ,अन्जु चौलागाईंको अभिनय देख्न सकिन्छ। दिलिप समनले निर्देशन गरेको भिडियो नेपालमा नै छायांकन गरिएको हो । श्रीराम अधिकारीकोको शब्द संकलन रहेको उक्त गितमा संगीत
नझर्ने फूल फुलेछ मुनाको दिलको बारीमा (भिडियोसहित)
काठमाडौं । हरितालिका तीजले नेपाली परिवेशमा आँगन टेक्नै लागेको छ । यही छेको पारेर कलाकारहरुलाई पनि तीज गीतको म्युजिक भिडियो बजारमा ल्याउने हतारो छ । तीजको यही रमझममा लोकप्रिय गायिका मुना थापामगरको दिलको बारीमा भने नझर्ने फूल पो फुलेछ । हो, उनै चर्चित लोकदोहोरी गायिका मुना थापामगर र सुरेश रावलको
अलि छिटो साइत गरी कहाँ जाँदैछिन् तीजमा मुना ? (म्युजिक भिडियोसहित)
काठमाडौं । अघिपछिको तीजमा माइत जान नपाएकी चर्चित लोकदोहोरी गायिका मुना थापा मगर यसपालि भने अलि छिटै साइत गर्दैछिन् । उनले अलि छिटै साइत गरी माइत गएर आमाले पकाएको मिठो मिठो खाने पनि सुर कसेकी छन् । अलि छिटो साइत गरे पनि माइत गएर मिठो मिठो खाने सुर कसे पनि
तुलसी सिवाकोटीको ‘ओठैले‘ बोलको गीतको प्रोमो सार्बजनिक
स्विजरल्याण्ड । युरोपमा नै चर्चित रहेका गायककार तुलसी सिवाकोटीको ‘ ओठैले ‘ बोलको गितको म्युजिक भिडियो तयार भएको छ । जसको प्रोमो सार्बजनिक भएको छ । म्युजिक भिडियोमा प्रवेश ढुंगाना ,अन्जु चौलागाईंको अभिनय देख्न सकिन्छ। दिलिप समनले निर्देशन गरेको भिडियो नेपालमा नै छायांकन गरिएको हो । श्रीराम अधिकारीकोको शब्द संकलन
तीजका लागि प्रेमविवश घर्तीको “छोटो छोटो चोली” (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपाली महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकिँदै गर्दा तीजगीतको बाढी पनि बाढी नै लागेको छ । यो बाढीमा दाङका कलाकार प्रेमविवश घर्तीले चाहिँ तीजको पाहुर भनेर ल्याएका छन्, छोटो छोटो चोली । सारै राम्री चिटिक्कै भा रैछ्यौ चोलीमा यो ज्यान लठ्ठै पर्छ झन त्यो तिम्रो बोलीमा सिङ्गापुरे सारीमा
यो सालैको तीजैमा सलिनालाई बिगारेछ छोटो जामाले
दाङ । कसलाई केले बिगार्छ, कसलाई केले बिगार्छ ? थाहै हुँदैन । यो सालको तीजमा चाहिँ दाङकी नवगायिका सलिना गहतराजलाई भने छोटो जामाले बिगारेछ । उनको तीज गीत “मलाई बिगार्यो छोटो जामाले” बजारमा आएको छ । यसअघि नृत्य तथा मोडलिङ्ग क्षेत्रमा सक्रिय गहतराजको पहिलो तीज गीत कोसेली चर्चित तथा स्थापित
लोसिना अभिनित “म त हजुर तुलसीपुरको झिल्के” तीजगीत बजारमा (भिडियोसहित)
दाङ । मोडल एवं नृत्याङ्गना लोसिना लामिछाने अभिनित “म त हजुर तुलसीपुरको झिल्के” बोलको तीजगीत बजारमा आएको छ । उक्त गीतको म्युजिक भिडियोमा लोसिना लामिछाने, बिजय थापा, आशिका रजौरे र मनिषले अभिनय गरेका छन् र धेरै दर्शक÷स्रोताबाट रुचाइएको छ । गायक भुवन परियार र गायिका डिला बस्यालको सुमधुर स्वरमा सजिएको
मुनाको कोमल मन रेटेर जाने को होला ?
काठमाडौं । लोकप्रिय गायिका मुना थापामगरको कोमल मन रेटिएको छ । मुनाको कोमल मन रेटेर जाने को होला ? प्रिय पाठकहरु, यो सुनेर तपाईंहरु नझुक्किनु होला । मुना थापाको वास्तविक जीवनमा उनको मन भने रेटिएको हैन । उनले गाएको गीतमा उनको मन रेटिएको हो । जसले कोमल मन रेटेर गयो
नृत्य विधाको राप्ती अञ्चलस्तरीय “उत्सर्ग डान्सिङ स्टार–३” प्रारम्भ
दाङ । राप्ती अञ्चलस्तरीय नृत्य प्रतियोगिता उत्सर्ग डान्सिङ स्टार ३ को शनिबार घोराहीमा शुभारम्भ गरियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष खड्गबहादुर बुढाथोकीले एक विशेष समारोहमा मैनबत्ती प्रज्वलन गरी प्रतियोगिताको उद्घान गरेका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि बुढाथोकीले राप्तीको कला, संस्कृति एवं नवप्रतिभाहरुको
प्रेमविवश र सुवास दुई घर्तीका दुई तीज गीत
काठमाडौं । हिन्दू महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीज आउन अझै करिब दुई महिना बाँकी रहेको छ । तर, काठमाडौं भने अहिले नै तीजमय बनिसकेको छ । सयौ तीज गीत रेकर्ड भएका छन् । आजभोलि स्टुडियोहरु भरिभराउ छन् । लोकदोहोरी कलाकारहरु तीज गीतकै चटारोमा निकै ब्यस्त देखिन्छन् । यही मेसोमा उत्तिकै
कसको सङ्गतले बिग्रिन् लोकदोहोरी गायिका मुना ?
दाङ । सरल स्वभाव र सिधासादा मुना थापामगर बिग्रेकी छन् अरे बेनी बजार झरेपछि । उनी कसरी बिग्रिइन् त ? चर्चा चलेको छ– कसैको सङ्गतमा पर्नाले अनि कसैको भ्रममा पर्नाले । चिन्ता नगर्नुस्, तपाईंको प्रिय लोकदोहोरी गायिका मुना वास्तविक जीवनमा होइन एउटा गीतको कुरा हो यो । हो, बजारमा अहिले
मुनालाई सतायो “खाडीको चर्को घाम”ले
काठमाडौं । खाडीको चर्को घामले गायिका मुना थापामगरलाई बेस्सरी सताएको छ । तर, यो उनको वास्तविक जीवनमा नभई गीतमा हो । सुमधुर स्वरकी धनी चर्चित लोकदोहोरी गायिका मुना थापामगरको कोकिलकण्ठी स्वरले सजिएको “खाडीको चर्को घामले”बोलको गीत भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । प्रस्तुत गीतमा मुना थापामगरसँगै विष्णु खत्री र प्रदीप क्षेत्रीले
गायिकाको छाप छोड्ने यात्रामा नायिका रेखा थापा
काठमाडौं । एउटा व्यक्तिमा एउटा प्रतिभा त धेरैको देख्न सकिन्छ तर बहुप्रतिभाका धनी भने केहीमात्र हुन्छन् । त्यस्तै बहुप्रतिभाकी धनी हुन् रेखा थापा । रेखाले नेपाली सिनेमा जगतमा करीव डेढ दशकदेखि एकछत्र राज त गरेकी छन् नै, उनले आफूमा निहित अन्य प्रतिभालाई पनि उजागर गर्न थालेकी छन् । सधैं चर्चाको
हिरो अफ भ्वाइसका उत्कृष्ट प्रतिभाहरुको सम्मान
दाङ । राप्तीको सर्वाधिक लोकप्रिय गायन प्रतियोगिता हिरो अफ भ्वाइस ४ का उत्कृष्ट प्रतिभाहरुलाई बुधबार घोराहीमा एक कार्यक्रम गरी सम्मान गरिएको छ । सम्मानित हुनेहरुमा अञ्जली पौडेल, विमला ठेंडी मगर, निरज घर्ती मगर, प्राची विडारी, शारदा अधिकारी, साक्षी गुप्ता, प्रिक्षा चौधरी, सुधा भण्डारी, निलिमा सुवेदी, नगिना श्रेष्ठ, विवेक नेपाली, सुरेन्द्र